Gonzo's Quest | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! Gonzo's Quest | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
အချိန်ပြန်သွားပြီးကျော်ကြားတဲ့စပိန်စူးစမ်းရှာဖွေသူ join, ဂွန်ဇာ Pizarro, အယ်လ်ဒိုရာဒို၏ဆုံးရှုံးသွားသောမြို့အဘို့မိမိအရှာဖွေရေးအတွက်. Gonzo ရှာပုံတော် တောင်အမေရိကအတွက်တစ်နေရာရာတည်ရှိခံရဖို့ပြောဆိုသောရွှေရာ၌ဒဏ္ဍာရီမြို့အဘို့ဤ conquistador ရဲ့ရှာဖွေရေးထံအပ်နှံသောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ရွှေမြို့တော်ကိုသူ့ရှာဖွေရေးအတွက်, ဖြစ်ကောင်းသင်သည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့သူတို့အားရွှေဆုလာဘ်အချို့ကိုဖမ်းပြီးနိုင်ပါတယ်!
Gonzo ရှာပုံတော် ရှိပါတယ်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း,3တန်းစီခြင်းနှင့် 20 paylines. ဒီဂိမ်းကိုသင်အနိုင်ရကြောင်းဆုလာဘ်စုဆောင်းဖို့ reels လည်အဖြစ်ပီရူး၏တောမှတဆင့်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပျောက်မြို့အဘို့မိမိအရှာဖွေရေးအတွက် Gonzo ကူညီန်းကျင်အခြေတည်နေသည်. သငျသညျနောက်ဆုံးတော့မြို့တော်ကိုရှာဖွေတာအတွက်အောင်မြင်ဖို့အခါသင်ထီပေါက်ရလိမ့်မယ်.
ဒီဂိမ်းထဲမှာဖြန့်ချိခဲ့သည် 2010 နာမည်ကျော်ဂိမ်းကုမ္ပဏီအားဖြင့်, NetEnt. ဒါဟာကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးပလက်တီနမ်ကိုဗီဒီယိုခဲ့သည် slot ကဂိမ်း ဒါဟာပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်သောအခါကြီးမားသောအောင်မြင်မှုပူဇော်သက္ကာနှင့်ပျော်မွေ့. ၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်းမှတဆင့်, ကတုန်းပဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအတော်ပင်, ယနေ့တွင်.
Gonzo ရှာပုံတော် ဂရပ်ဖစ်ဖမ်းအချို့မျက်စိ features, Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောနောက်ခံတေးဂီတ, တစ်ခုနှင့် Avalanche အင်္ဂါရပ်နှင့်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအင်္ဂါရပ်များပါဝင်ကြောင်းဆုကြေးငွေ features တွေရှိပါတယ်. အဆိုပါ Avalanche အင်္ဂါရပ်ကိုသင်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှဆင်း tumble ကြောင်း reels တစ်ခုပြိုလဲဆုံးရှုံးမှုရှိရသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးအနိုင်ရပေါင်းစပ်ရတဲ့အားဖြင့် Avalanche အင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်နိုင်ပြီးသင်သည်မည်သည့်ရှည်အနိုင်ရလို့မရပါဘူးတိုင်အောင် retriggering ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်. သငျသညျ 15x အထိဒီ mode မှာတိုးပွားစေခံစားနိုငျ.
အခမဲ့လှည့်ခြင်းများသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို freefall သင်္ကေတများလာပြီခြင်းဖြင့် activated နိုင်ပါတယ် feature. သငျသညျအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ mode မှာရှိနေစဉ်သင်ကပင် Avalanche feature ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်. သင့်အာမခံတိုးပွားစေရန် Add နှင့်အချို့ကိုသင်အေးမြရယူထားသောအဘို့၌ရှိကြ၏. သင်ပိုမိုအနိုင်ရလိုင်းများရလျှင်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ retriggered နိုင်ပါသည်.
အဘယ်ကြောင့်ကစား Gonzo ရှာပုံတော်?
ဒီဂိမ်းအကြောင်းကိုထွက်ရပ်သောပထမဦးဆုံးအရာကာတွန်းဖြစ်ပါတယ်ချောမွေ့ပုံ. ဒါဟာသင့်ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်း slot ကဂိမ်းနဲ့တူခံစားရမကကစားသမားအကြားဤမျှလူကြိုက်များသည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ဖို့ထို့ကြောင့်လွယ်ကူပါတယ်. သင်တစ်ဦးအနိုင်ရပေါင်းစပ်ဂိုးသွင်းတိုင်းအချိန်, အဆိုပါ reel ဖြတ်ပြီး Gonzo moonwalks, အရာကိုသင်ကစားနေကြသည်နေစဉ်ဟာသအတွေ့အကြုံကိုစေသည်. ဒါကြောင့်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်ဂိမ်း၏နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအသှငျအပွငျပု reels လည်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်; သူတို့လုပ်ကွက်တစည်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြ. ဒါဟာသင်ပေါ့ပေါ့နည်းနည်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ပင်ဖြစ်ကြောင်းခံစားမိအောင်ဤအင်္ဂါရပ်များကိုသင်ငွေနှင့်အလောင်းအစားဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့စေမယ့်. အဆိုပါဆုကြေးငွေ features တွေသင်ကစားဘို့အခြို့သောအလွန်ကြီးစွာသောဆုလာဘ်ရနိုင်ဟုဆိုလို; အဆိုပါဆုကြေးငွေဝေးဆိတ်ကွယ်ရာများမှာပင်လျှင်, သူတို့သည်သင့်အတွက်လိပ်ကိုပြုသည့်အခါတွေအများကြီးအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်.
အခမဲ့ဝင်းရီးရဲလ်ငွေသည် slot Play | မာယာ Marvell
ဖုန်းဘီလ်အားဖြင့်မိုဘိုင်းကာစီနို Deposit | Slots Pay by…
အွန်လိုင်းဗြိတိန် slot အပိုဆုကြေးငွေ – သင့်ရဲ့£5အခမဲ့ Get!
သင်ကအခမဲ့လှည့်ဖျားအနိုင်ရမည်ဟုအဘယ်အရာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ | slot Fruity ရီးရဲလ်အပိုဆု!
2018 © Copyright, slot Fruity. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး